भारतीय दूतावासले किन नष्ट गर्‍यो यी कागजातहरु ? - Nepal News - Latest News from Nepal
भारतीय दूतावासले किन नष्ट गर्‍यो यी कागजातहरु ?
काठमाडौं, वैशाख ९ – भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल स्थित भारतीय दूतावासबाट एकैपटक दर्जनौ कर्मचारी सरुवा गरेपछि दूतावासभित्र रुवावासी मात्र होइन लुछाचुडी पनि भएको छ । अहिले उनीहरु दूतावासमा बसेर पहिले गरेका करतुतहरु नष्ट गर्न लागि परेका छन् ।
राजनीतिक विभाग, अर्थ विभाग, सँस्कृति विभाग, सुचना विभागलगायतका क्षेत्र हेर्ने प्रमुखहरुलाई सरुवा गरेपछि कर्मचारीहरुले मोदी सरकारलाई सराप्न थालेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनीहरुले पुराना फाइल र काम नलाग्ने कागजात भन्दै त्यसलाई च्यातेर जलाएका छन् ।
भारतीय काँग्रेसको भर्ती केन्द्र जस्तै रहेको भारतीय दूतावासको काम कारवाहीप्रति मोदी सरकार असन्तुष्ट देखिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि नेपाल मालदार देशमध्येको मानिन्छ । विदेश मन्त्रालयकाबाट नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा आउन भनसुन गराईरहेका हुन्छन् । भारतले एसिया देशमध्ये सबभन्दा बढी खर्च नेपालमा गरिरहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
जहाँ बढी खर्च हुन्छ त्यहाँ आम्दानी र कमिशन पनि बढी हुने भएकाले कर्मचारीहरुको आकर्षण नेपालतर्फ देखिएको छ । यस अवस्थामा उनीहरुलाई सरुवा गरेपछि कर्मचारीहरु तनाव देखिएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार एकैपल्ट सबैको सरुवा हुने भएपछि उनीहरुले गरेका कामकारवाहीको फाइल र कागजातहरु नष्ट गरेका हुन् । अरु कर्मचारी आएपछि आफूहरुको पोल खुल्ला भन्ने डरले फाइल तथा कागजात जलाएको हो । ‘जलाइएका फाइल र कागजातहरुमा यस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण कागजातहरु थिए जो कसैको जीवन र मरणसँग जोडिएका थिए । काम गराउनका लागि वर्षौसम्म दूतावास धाएका थिए तर काम भएन, फाइला थन्केको थन्के रह्यो आज त्यही फाइल जलाएको हुनुपर्छ’ एक कर्मचारीले भने ।
पुराना फाइल तथा कागजात जलाउन अनुमति माग्नुपर्छ , अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र जलाउन सकिन्छ तर दूतावासका केही कर्मचारीहरुको सन्किका कारण यस्तो भएको ती कर्मचारीले भने, मार्च सात तारेखका दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न देशमा रहेका आफ्ना राजदूतलाई बोलाएर दूतावासहरुलाई प्रविधियुक्त बनाउन निर्देशन दिएका दिएका थिए । प्रविधिमा लैजानुको अर्थ यो होइन कि पुराना फाइलहरु च्याति दिनु । तर अहिले दूतावास त्यस्तो प्रविधिको पनि विकास गरेको छैन । तर त्यसको बाहनामा पुराना फाइल र कागजात भन्दै जलाएका छन् ।
दूतावासका एक कर्मचारीले वर्षौ पुरानो फाइलहरु थन्काएर के गर्ने काम नलाग्ने फाइल तथा कागजात जलाएको बताए । उनले दूतावासलाई डिजिटलाइजेशन गर्न लागेको कारण पुराना काम नलाग्ने फाइलहरु च्यातिएको बताए ।
यस विषयमा जानकारी लिन दूतावासका प्रवक्ता अभयकुमार सिहलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनी फोन सम्पर्कमा आउन चाहेन ।
कास्कीमा फेरि दुई बालिका बलात्कृत
पैसा कमाउने बोर्डिङ स्कुल, शैक्षिक कर तिर्ने अविभावक